पूरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, १९ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्रीहरू थप गर्ने संकेत गरे ।
बाहिर प्रचारमा आएजस्तो पूरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरिने विषयमा भन्दा मन्त्रालयको काममा तनाव लिनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
‘आफ्नो मन्त्रालयको काम रफ्तारमा गर्नुहोस् । मन्त्री फेरिने विषयमा भन्दा पनि आफ्नो मन्त्रालयको कामको तनाव लिनुहोस् । रिक्त मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउनुहुन्छ तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अढाई वर्ष अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडालाई धन्यवाद दिए । उनले मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर सहयोग गर्न खतिवडालाई आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका डा. खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गरेका थिए ।